သခင်စိတ်နဲ့ ကျွန်စိတ် No vote | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » သခင်စိတ်နဲ့ ကျွန်စိတ် No vote
သခင်စိတ်နဲ့ ကျွန်စိတ် No vote
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Nov 1, 2010 in 2010/2012/2015 Election, Myanma News | 8 comments
ထင်ရှားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သူများနဲ့ ပါဝင်အရွေးခံမဲ့သူ ထောက်ခံသူများရဲ့ ပြောစကားတွေကို လက်လှမ်းမှီသလောက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ သခင်စိတ်နဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်သူများနဲ့ ကျွန်စိတ်နဲ့ပေးသမျှယူ ကျွေးသမျှစားပြီး ရလိုရငြားလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုများပါ။ ၁၉၉ဝ အလွန်နှစ်တွေလောက်က ဒေါ်စုကို လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရာထူးပေးဖို့ ရာထားတယ်လို့ နအဖက အင်္ဂလန်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ မြန်မာဆရာတော်တပါးကို လျောက်ဖူးပါတယ်။ တခါ ၂၀၀ဝခုနှစ်များမှာ ဒေါ်စု အကျယ်ချုပ်က ပြန်လွတ်လာတုန်းကလည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးရာထူးပေးမယ်လို့ ထောက်လှန်းရေးက သတင်းလွှင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ အတိုက်အခံဟောင်းများ အဲဒီလိုသာ ကမ်းလှမ်းခံရရင်ဆိုပြီး အင်နဲ့အားနဲ့ မဲဆွယ်နေကြပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ခြင်္သေ့မှန်ရင် မြက်မစားပါဘူး၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဇာတ်ရှုပ်ကြီးကို ရှင်းချင်ရင် ဒေါ်စုနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ၊ မြေပေါ်မြေအောက် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များမပါလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ရမယ်ထင်လို့ စစ်တပ်က တကိုယ်တော်ကခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၅ဝ နီးပါးရှိပါပြီ။ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြေရှင်းမှုမျိုး ရှိရင်ပြစမ်းပါ။ ဒါကြောင့် ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဘယ်သူ့မဲပေးရနိုးနိုး တွေဝေနေမဲ့အစား အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ လာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံခေါ်ယူမဲ့ အစီအစဉ်ကို ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြပါစို့။
“ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ဥပေးအရ မဲမပေးဘဲ နေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်” (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)။
နောက်တချက်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီက ဝင်မပြိုင်ဘူး ဒီတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ “အန်အယ်လ်ဒီကိုပဲ မဲပေးချင်တယ်၊ အန်အယ်လ်ဒီ မရှိရင် မပေးနဲ့ပေါ့” (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)။
“ထပ်ပြောချင်တဲ့ စကားကတော့ မဲရုံတွေကို မသွားပါနဲ့၊ မဲမပေးပါနဲ့။ မဲရုံထဲကို မသွားမနေရ ဆွဲသွင်းရင်လည်း ပယ်မဲဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါ။ အဲဒါပဲကျနော်ပြောချင်ပါတယ်” (ဦးဝင်းတင်)။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့က အနိုင်ယူပြီးတော့ တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ပြည်သူအားလုံးကို စစ်ကျွန်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ တရားဝင် ထောက်ခံမှုရအောင် ကြိုးစားပြီးတော့ ကမ္ဘာကို မျက်လှည့်ပြတာပဲ။ အမှန်ကတော့ ဒီမိုကရေစီကို အမှန်တကယ် ယုံတယ်ဆိုရင် ဒီ ၂၅% ဆိုတာလဲ ထည့်ဖို့ မလိုဘူးပေါ့” (ဦးတင်ဦး)။
“မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဖော်ပြနိုင်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ကို ပိုပြီး နည်းလာတဲ့ သဘောမျိုးတွေ၊ ပိုပြီးတင်းကျပ်လာတဲ့ သဘောမျိုးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ မြန်မာ့နို်င်ငံရေးမှာ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေတောင်မှ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်မှုကို ကန့်သတ်လာမှုတွေ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီအခြေအနေ တစုံတရာ ပေါ်ထွန်းဖို့ မရှိသေးပါဘူး” (ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဌဟောင်း)။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ တရားမျှတမှု မရှိဘူးလို့ဘဲ ခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့ကို ဖိနှိပ်တာဘဲ။ ကျနော်ကတော့ ဘယ်မှာ မဲထည့်ရမလဲဆိုတာ မသိတော့ဘူး။ မထည့်တော့ဘူးပေါ့။ ကျနော်လိုဘဲ ခံစားရတဲ့ လူတွေများမှာပါ (ဦးတူးရော်၊ အစိုးရ ခွင့်မပြုသော ကချင်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးပါတီ)။
“ပြည်သူတွေကို စောင့်ကြည့်တော့ နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတတွေတော့ တွေ့ရတာပဲလေ။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ မဲလိမ်မှုမရှိဘူး၊ လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့်ရှိမယ်၊ လွတ်လပ်စွာ မဲ ရေတွက်ခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင် နိုင်ချေ များပါတယ်” (ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ အန်ဒီအက်ဖ်)။
ဒါက တွေ့လာရင်တော့ တွေ့လာသလို လုပ်ရမှာပေါ့။ အဆင်မပြေတာတွေ့လည်း အဆင်မပြေတာကို အန်ကယ်တို့က ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။ အဆင်ပြေတာတွေ့လည်း အဆင်ပြေတာကို အသုံးချပြီးတော့ ကောင်းအောင် ဆက်လုပ်သွားရမှာပဲ။ ဘယ်လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့ လုပ်မယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုး ဆိုရင်တော့ မလုပ်ဘူး မဟုတ်ပါဘူး။ တွေ့လာတဲ့ အခြေအနေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ရင်ဆိုင်သွားမှာပါ။ (ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊ အန်ဒီအက်ဖ်)
“ဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တယ်ဆိုကတည်းက ဆုတ်တာပါပဲ။ လူထုအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ပါတီတွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ စစ်တပ်က ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ယူထားတယ်ဆိုပေမယ့် ပါတီတွေလည်း တကယ်ကြိုးစားမယ်၊ လူထုကလည်း တကယ်အားပေးမယ် ဆိုရင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ရနိုင်သေးတာပေါ့။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်မှာပေါ့။ ကိုယ်ကများများလုပ်နိုင်ရင် သူတို့က များများဆုတ်မယ်၊ နည်းနည်းလုပ်ရင်တော့ နည်းနည်းပဲ ဆုတ်မှာပေါ့လေ” (ဦးသုဝေ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ)။
“ခုမြန်မာပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ အဲဒီ ၈၈ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်း အခြေအနေကို ပြန်ရောက်နေရတယ်။ အဲဒီတုန်းက လမ်းစဉ်ပါတီက မဲတော်တော်များများကြီး နိုင်,နိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့။ အခု ကျတော့ ဒီ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက သူ့အမတ်လောင်း အရေအတွက်နဲ့ကို ဒီ မဲဆန္ဒနယ် အများစုမှာ နိုင်လိမ့်မယ်။ ကျနော်လည်း ဒီဥစ္စာကို လိုလားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ သို့သော် တခြား ရွေးနိုင်စရာလမ်းက ဘာရှိလဲ၊ အဲဒါ မေးစရာရှိတယ်။ ဒီဥစ္စာကြီးကို ကျနော်တို့အနေနဲ့ ငြင်းလို့ကော ရနိုင်မလားဗျာ” (ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံသူ)။
လိုတာလေးတွေ လုပ်ပေးလိုက်ရင် နိုင်ငံရေး ပဲလေ။ စပါးလိုရင် စပါးစိုက်ပေးလိုက်။ တံတားလို တံတားလုပ်ပေးလိုက်၊ လမ်းလို လမ်းလုပ်လိုက်။ ကျုပ်ဂျာနယ်တွေကို ကြောက်လွန်းလို့ ဂျာနယ်လုပ်တဲ့ကလေးတွေက အရမ်း ငယ်တယ်လေ။ ပရမ်းပတာတွေ ရေးလိုက်ရင် ပြဿနာ။ (ဇေကမာ္ဘဦးခင်ရွှေ၊ ကြက်ဖွတ်အမတ်လောင်း)
ညီလာခံကို ကျောခိုင်းခဲ့တဲ့ ပါတီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကို ခြေဦးမလှည့်တဲ့ ပါတီတွေဟာ မင်းလောင်းတင်ပွဲမှာ ဝေါမထမ်းချင်လို့ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလို့ မြင်ပါတယ်။
ကိုယ့်လည်ပင်းကို စွပ်မဲ့ (ဘယ်တော့မှလည်း ပြန်ချွတ်ဖို့ မလွယ်ကူတဲ့) ကြိုးကွင်းကို ကိုယ့်လက်နဲ့တော့ မစွပ်ပါရစေနဲ့။
ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာသူတွေဟာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို အသက်နဲ့လဲပြီး ကာကွယ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ချက် မရှိသူတွေကတော့ ဟိုကွေ့ ဟိုတက်နဲ့လှော်၊ ဒီကွေ့ ဒီတက်နဲ့လှော်ပြီး မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချလို့ ရသမျှ အသုံးချကြပါလိမ့်မယ်။
အသုံးချ မခံချင်ရင်တော့ ကိုယ်ခံအား ကောင်းဖို့နဲ့ အလွယ်တကူ ခေါင်းမညိတ်တတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
. . . . . . . . . . . . . လိုတာလေးတွေ လုပ်ပေးလိုက်ရင် နိုင်ငံရေး ပဲလေ။ စပါးလိုရင် စပါးစိုက်ပေးလိုက်။ တံတားလို တံတားလုပ်ပေးလိုက်၊ လမ်းလို လမ်းလုပ်လိုက်။ ကျုပ်ဂျာနယ်တွေကို ကြောက်လွန်းလို့ ဂျာနယ်လုပ်တဲ့ကလေးတွေက အရမ်း ငယ်တယ်လေ။ ပရမ်းပတာတွေ ရေးလိုက်ရင် ပြဿနာ။ (ဇေကမာ္ဘဦးခင်ရွှေ၊ ကြက်ဖွတ်အမတ်လောင်း)
ထင်ရှားသူတွေရဲ့ စကားတွေကို ရှာဖွေ ဖော်ပြပေးတဲ့ bigcat ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ဇေကမာ္ဘခင်ရွှေ သူက မှောင်ခိုဟောင်း
သူ့ချွေးမက အငြိမ်းစား နိုင်ငံတော်ဖာသည်
ခြင်္သေ့က အတောင်နဲ ့ဦးချို လိုခြင်နေတာ သူရရှိရေးတွက် သူကြံစည်ကြိုးစားတာက သူ ့ကဏ္ဍလေ
ဂျိုနဲ ့အတောင်ရသွားတော့ super lion the king ပေါ့
ဒါပေမယ့် ဦးဂျိုနဲ ့အတောင် ရရှိရေးတွက် မဲဝင်အရွေးခံပေးတဲ့ကောင်တွေ ကို ကြတော့ ဘယ်လိုခေါ်မလဲမသိဘူး
အရင်အခြေအနေနဲ ့တုန်းက အကိုက်ဘဲခံရမှာဗျ အခုတော့ အခွေ ့ပါခံ အတောင်နဲ ့လဲ အရိုက်ခံ
မကြာပါဘူး လွှတ်တော်ထဲမှာ ခေါင်းညိမ့် လက်ခုပ်တီးဖို ့ပြင်ဆင်ထားကြပါလို ့
ko kyaw !
bar tway ma kyay ma nat pyit nay le`?????
မြန်မာပြည်ရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး သမိုင်း တရားခံ အဖြစ်နဲ နောင်တမရချင်ရင် မဲမထည့်ဘဲနေ လိုက်ပါ နောင်စိတ်သန့်တာပေါ့။
ပြိုင်ဖက်အတိုက်အခံပါတီတွေကတော့ ဘယ်လိုမှတားမ၇၊ အကောင်ပြလို့လည်းအရိပ်မထင်…..လူထုရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုတောင်မမြင်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ နိုင်ဝင်ဘာ(၇)ရက်နောက်ပိုင်းသူတို့တတွေရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ရင်လေးမိပါတယ်။ သူတို့ဘဝသမိုင်းကြောင်းကိုသူတို့ဖာသာဖန်တီးသွားတာဘဲ။ ခေတ်ပြောင်းလို့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်ကြတဲ့အချိန်သူတို့အတွက်နေရာမရှိတော့ပါဘူး။ အရင်ကအနစ်နာခံ၊ဒုက္ခခံခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေသဲထဲရေသွန်ဖြစ်ပါပေါ့လား။